Pyay Ti Oo + Eaindra Kyaw Zin @ Bali Beach, Indonesia | Myanmar Celebrity Couple Photos
Pyay Ti Oo + Eaindra Kyaw Zin @ Bali Beach, Indonesia
Pyay Ti Oo and Eaindra Kyaw Zin at Bali Islands, Indonesia on February 2011
Sony Camera Advertisement??!!!
ပျင်းတယ်ကွာ တစ်ခုခု လုပ်ရအောင် .. ပြေတီဦး - အချစ် ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် - အိုကေ
အိန္ဒြာ - ဘယ် Sexy Bikini ကောင်မလေးတွေကို ရိုက်နေပါလိမ့်
Love and Peace ??!!!
moonFebruary 24, 2011 at 11:36 AMsate pyat tel.. 2yout lone ka ya yar sawe u kya dar koo... arr kya s yar ma kg bur bu...ReplyDeleteTHFebruary 24, 2011 at 8:38 PMအားကျစရာမကောင်းဘူးလို့ ပြောနေတဲ့အပေါ်ကဟာ စိတ်ထဲတစ်ကယ်ဖြစ်နေတာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်မပြောနဲ့။ နောက်တစ်ခု နင်သိရမှာက အားကျဖို့ အားမကျဖို့ထက် မုဒိတာပွားတတ်ဖို့ နင့်စိတ်နှလုံးကို ဆေးကုဖို့ပဲ။ReplyDeleteCherryMarch 7, 2011 at 1:16 AMစိတ်ညစ်ခံမနေပါနဲ. moon ရယ် တခြား site ကိုသွားကြည်.ပါလားပုံတွေကြည်.ပြီး မကောင်းပဲပြောနေတော.ကိုယ်ဖါသာကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲနေမှာပေါ. ဒီလောက်ကြည်.လို.အဆင်ပြေတဲ.စုံတွဲကို အပြစ်ပဲပြောနေတာဆိုတော.....အင်းတခုခုတော.မှားနေပြီထင်တယ်ReplyDeletekawMarch 11, 2011 at 9:42 AMmoon will u stop ur bad posting in here???????coz this luvly actress is my favourite lady..n her husband as well i really don't like that kind of person who wrote about them.....k!asalast time,pls do not write any bad things about them >>>>>>>>ReplyDeletemalayMarch 12, 2011 at 6:39 PMHappy Honeymoon..ReplyDeletemalayMarch 12, 2011 at 6:40 PMHappy Honeymoon.. wish you two all the best..ReplyDeletekhinApril 1, 2011 at 1:23 AMway phan yay nae, lay kan yay mar number 1 tawe pae :DReplyDeleteheinApril 3, 2011 at 6:16 AMအော် ငပေါ ပြေတည်ဦး မင်း က အာရုန်ဦးမှာဖူးသည်ကြာ ကားထဲမှာတော့မျိုးချစ်ကြီးပါ ကြီးတော်မို့ လို့ ဘာလီကိုသွားတာလား ပုဂံလောက်ဆိုတော်ရောပေါ့ဟReplyDeletetharApril 24, 2011 at 9:20 AMအော် ငါတို့ မင်းသားမင်းသမီးဘ၀ကလည်း ဇတ်ကားတွေက ကမ္ဘာမကျော်တော့ သူတို့ကို ၀ိုင်းပြီးအော်တိုထိုးခိုင်းမယ့်သူတောင်မရှိဘူး။ :(ReplyDeleteslfoodsgardenJune 13, 2011 at 9:49 AMI thought they are actor and actress? they just don't know how to post for camera!!! too bad!!!ReplyDeleteTruth tellerJune 19, 2011 at 11:26 PMhi,cherry and TH don't be say other ppl.must be wash ur eyes for truth. we think Idian insane and idiot go outside.Thats is.If u like very much ,u shoud give ur mother,sister and daughter for pyay ti oo. DON'T BE BLIND.ReplyDeleteTHJuly 24, 2011 at 7:54 PMအပေါ်ကကောင်ခပ်ညံ့ညံ့အင်္ဂလိပ်အရေးအသားနဲ့ သောက်ဖြစ်မရှိရေးနေတာ မရှက်ဘူးလား။မင်းအင်္ဂလိပ်အရေးအသားနဲ့ မင်းစိတ်ဓါတ်က လိုက်လည်းလိုက်ပါ့ကွာ။သူ့တို့ဘာသာ ဘာလုပ်လုပ် သူတို့ဘ၀နဲ့သူတို့။ မင်းဘ၀ကို လာပြီးမထိခိုက်ရင် ပြီးတာပဲမဟုတ်လား။ ဘာလို့ အောင်တန်းစားစိတ်ဓါတ်ဖြစ်နေရတာတုန်း။ မင်း သမီးရလာမှ မင်းနိုင်အောင်ထိန်း။ အိုကွာ မင်းမယားကိုပါ နိုင်အောင်ထိန်း။ ၀ဌ်မလည်ပါစေနဲ့ပေါ့ကွာ။ သူများကို အားရပါးရပြောတုန်းက ပြောထားပြီးပြီဆိုတော့ReplyDeleteGGSeptember 2, 2011 at 12:52 AMLIKE TH comments.Some people have suchaboring life that they have talk down on other people.You haveabad comments keep it in your own brainless head.ReplyDeletechitchitNovember 17, 2011 at 11:29 AMyeah that rihgtReplyDeleteAdd commentLoad more...